အောင်မြင်ဖို့အတွက်၊ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်, သင် reprogram ရန်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် PMO နှင့်ဆက်ဆံမှုကိုစွဲလမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါ "အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်း" ဟုခေါ်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးဤစာမူ၏ခေါင်းစီးကိုပထမစာမျက်နှာအနည်းငယ်မှအပိုင်းအစတစ်ခုကမှုတ်သွင်းထားသည်။
သင်စဉ်းစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ ၄၀% သည်အလိုအလျောက်အလေ့အထများဖြစ်သည်။ အိပ်ရာမှထထွက်ခြင်း၊ သွားတိုက်ခြင်း၊ သီးနှံလောင်းခြင်း၊ အလုပ်ခွင်သို့မောင်းခြင်းစသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု။ PMO သည် ၄ ​​င်း၏ ၄၀% သောအလိုအလျှောက်အလေ့အထတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်စေရန်အချိန်အလုံအလောက် PMOed ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဆန္ဒအလျောက်ကပရိုဂရမ်။
အခုဆိုရင်သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး reprogram ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? မရှိတော့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာ PMO တပ်မက်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်ပေးပါ။
ငါဥပမာတစ်ခုဇာတ်လမ်းကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ ၃-၃:၃၀ နာရီကြားမှာမင်းဟာအလုပ်မှာငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုပါစို့။ သင်ကကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပြီးကွတ်ကီးတစ်လုံးရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သင် ၀ ယ်ပြီးနောက်သင်ကော်ဖီဆိုင်၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပေါင်းသင်းပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ cue 3-3 မှာပျင်းလျက်ရှိသည်: 30 pm တွင်
အဆိုပါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခု cookie ကိုဝယ်ယူ
လုပ်ဖော်နှင့်အတူ socializing = တော့ဘူးပျင်းမနေချိန်တွင်အဆိုပါဆုလာဘ်ကြောင့်အစာစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာပါ။ သင်ဟာကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပြီ နောက်ပြissueနာတစ်ခုမှာ cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ကိုပြောင်းလဲရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်းသင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်လုပ်ချင်သည်မှာအလုပ်ပြန်မသွားခင်အခြားသူများနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှပေါင်းသင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။ သင်ကကော်ဖီဆိုင်တွင်ကွတ်ကီးကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်၏စားပွဲသို့လျှောက်သွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်စကားပြောရုံဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ရေး! ပြနာဖြေရှင်းပြီး
ယခု PMO တွင်“ အလေ့အထ” ပုံသေနည်းကိုထည့်ပါစို့။
ဥပမာအားဖြင့် PMO အခြေအနေ (မသာဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်)
CUE - မင်းကမင်းသူငယ်ချင်းနဲ့မကြာခဏမကြာခဏစကားပြောနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရည်းစားကိုယူလာပြီး PDA အများကြီးမှာပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ ဤအရာသည်သင့်ကိုအထီးကျန်သည်ဟုခံစားရစေပြီးတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ထိုရင်းနှီးမှုကိုလိုလားသည်
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်: porn မှ PMO
ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာ cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ကိုတကယ်မပြောင်းနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါလုပ်နေတာဒီမှာ
CUE: horny ခံစားရတယ်
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်: ပြေး, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်လှေကားလေး
ဆု - ကျွန်ုပ်သည်မြဲမြဲနေမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၌တုန်လှုပ်နေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိနိုင်သည်ကို သိ၍ အောင်မြင်ခြင်း၏အသိ၊ ထို့အပြင် endorphins
ဤအရာကိုနားလည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ PMO ကိုမည်သို့ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ငါပြmeနာကိုပိုပြီးသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကူညီနိုင်မှမျှဝေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
မှတ်ချက်: ဤပို့စ်တွင်သတင်းအချက်အလက်မှုတ်သွင်း / နှစ်ခုစာအုပ်တွေထဲကနေယူခဲ့ပါတယ်:
ချားလ်စ် Duhigg ဖွငျ့ကငျြ့ကို The Power of
Pax နဲ့ Chris Prentiss အားဖြင့်အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုကုသ
ငါဖြစ်၏ မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ, ဤစာအုပ်များမြှင့်တင်ရန်။ သူတို့ကပဲမကြာသေးမီကငါ့ကိုတကယ်ပဲအထောက်အကူဖြစ်ရပြီ။
သငျသညျ PMO စွဲနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မဟုတ်ပါဘူး; သင်စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရစဉ်မိမိကိုယ်ကိုအလိုအလျှောက်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်သောမှီခိုမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေရသည်။ အောင်မြင်ဖို့အတွက်၊ ၎င်းသည်အောင်မြင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။